Ọnye na-bụ Naba master? - Afrikhepri Foundation
monday, Mee 10, 2021
Ònye bụ onye isi Naba?
NAba Lamoussa Morodenibig, Gourmantche si Fada N'Gourma, obodo dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Ouagadougou na Burkina Faso, malitere mbido ya mgbe ọ dị afọ asatọ. Dịka nwatakịrị, Naba nwere ike ịga ụlọ akwụkwọ ndị Europe ka ọ na-enwe ọganihu site na agụmakwụkwọ ọdịnala na mbido ime mmụọ. Ka ọ na-etolite, Naba gara n'ihu na agụmakwụkwọ ya, ọ bụghị naanị ọ gara mahadum, mana ọ makwara nke ọma na agụmakwụkwọ ọdịnala ya na nke mmụọ, mechara gafee ọkwa ndị nkuzi ya wee bụrụ otu n'ime ndị isi mmụọ. Dogon kasị nwee ikike.
Nnabata ime mmụọ ndị a kụziri bụ akụkụ nke ihe ndị ọkà mmụta banyere mmadụ nke oge a na-akpọ "ọha mmadụ nzuzo" na "ụlọ akwụkwọ ihe omimi". A na-enwetara ihe ọmụma ime mmụọ a site na nnabata na nkuzi siri ike ma sie ike nke a na-aghaghị ịzobe nzuzo n'etiti ndị bidoro. Ebumnuche ahụ bụ ihe ọmụma ụlọ akwụkwọ nke Memphis na Thebes ma nyefe ya site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ ruo ọtụtụ puku afọ. Master Naba ahụwo n'oge niile Merita (Omenala Africa) dị ka otu n'ime ndị isi kachasị ukwuu nke ihe ọmụma a, ọ bụkwa ya bụ ezigbo onye nkụzi mbụ ndị okenye ya họpụtara iji weta ihe ọmụma a na mpụga ụwa.
Master Naba eletala mba 127 ma rịọ maka ọnụnọ ya n'ọtụtụ ụlọ nsọ na ebe nsọ dị gburugburu ụwa. Nna-ukwu Naba sụrụ asụsụ iri na atọ, gụnyere Bekee, French na German, ọ bụkwa ọkaibe na “Egyptology” na ihe osise. Dị ka onye guzobere ụlọ akwụkwọ nke oge a bụ 'MTAM' (ọmụmụ banyere ume nke ụwa), ọ guzobere onwe ya dịka otu n'ime ndị isi kachasị mma na usoro ndị a.
A nabatawo Master Naba gburugburu ụwa dị ka onye nkuzi ime mmụọ. Ọ bụ ụkọchukwu ọdịnala, Nna-ukwu, na Ọgwọ Ọgwụ. Na mgbakwunye, Master Naba bụ parapsychologist, metaphysician, na onye mmume omenaala. Ọ mụrụ ma weghachite Kalịnda Sidereal (naanị kalenda nke ziri ezi na mbara igwe nke na-esiteghị n'ihe omume ma ọ bụ nkwenkwe mmekọrịta mmadụ na okpukpe), Ledger of Divine Ordinances (ntụgharị nke papyrus mbụ a maara dị ka Nw, Nbsni na Insa, nke ga-eweta iwu iri asaa na asaa mbụ e dere tupu Iso Christianityzọ Kraịst) na Mandala nke Denderah (map mbụ nke mbara igwe, kpakpando mbụ), n'etiti ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ.
Dị ka onye edemede, Master Naba bipụtara ihe karịrị akwụkwọ 25 n'ọtụtụ mba. Ọ na-ede uri na akụkọ ifo yana akwụkwọ na isiokwu gbasara M'TAM, omenaala na mmụọ. Ọ hiwere Bayuali Magazine, magazin esoteric, yana ọgụgụ nke Energy Land, Choices Magazine na Firefly Rising Magazine. Ọ tọrọ ntọala Khepra, nzukọ na-abụghị ọrụ nke ndị ọrụ ọdịnala Kemetic, ndị nyocha na ndị na-eme ihe. Master Naba bụ mmụọ nsọ maka nguzobe nke Maanu Earth Center, otu ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ na United States na-akụzi usoro na ụkpụrụ MTAM na ịkwalite ọnọdụ ime mmụọ nke Kemetic, ụkpụrụ na Omenala.
Dịka onye na-agwọ ọrịa, Naba bụ onye guzobere na onye isi ala nke ANKHKASTA, nzukọ nke ndị ụkọchukwu Kemetic na ndị na-agwọ ọrịa. Ndị otu Ankhkasta na-arụ ọrụ iwebata ma kwalite ọgwụ ọgwụ Kemetic maka ọrịa niile taa, ọnọdụ na nsogbu ime mmụọ ma ọ bụ nchegbu. Usoro ọgwụgwọ a bụ akụkụ nke ihe ọmụma nke ụlọ akwụkwọ mmalite na ọ bụ akụkụ nke ihe ọmụma ọdịnala esoteric.
Ihe omume ndị ọzọ nke Master Naba gụnyere igosi agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ, ndụmọdụ ndụmọdụ, ekpere na ọrụ ọzụzụ, nkuzi na ebe obibi.
Homo deus - Akụkọ Dị mkpirikpi nke Ọdịnihu (Audio)
The epics of Black Africa (Kindle)
Rivega - Akwukwo (2012)
Ncheta nke mmiri Dr Masaru Emoto
Nkuzi na Akụkọ banyere Africa (Kindle)